Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka oo sheegay in magaalada Marka la geyn doono ciidamo boolis iyo nabad-sugid isugu jira
Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Amniga qaranka C/kariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in Ciidamo boolis ah la geynayo magaalada Marka ee gobolka Shabellaha Hoose, halkaasoo booqasho ku joogaan isaga iyo Wasiiro ka tirsan Xukuumada.
Mr C/kariin Xuseen Guuleed oo wareysi siiyay Radio Muqdisho ayaa sheegay in magaalada Marka laga saari doono ciidamada milateriga, isagoo tilmaamay in ciidamada booliska iyo kuwa nabadsugida ay la wareegi doonaan ammaanka.
"Ciidamo boolis iyo nabadsugid ayaan magaalada Marka keeni doonaa, si ammaanka ay u sugaan, ciidamada milateriga iyo booliska waa ka saareynaa"ayuu yiri C/kariin Xuseen Guuleed oo xalay ay ku hoydeen magaalada Marka isaga iyo wafdigii la socday.
Wasiirka ayaa sheegay in kulamo ay la leeyihiin qeybaha bulshada iyo mas'uuliyiinta gobolka si ammaanka magaalada lagu xoojiyo, isagoo tilmaamay in shacabka ay doonayaan maamul u cuntami kara, si ay wada shaqeyn ula yeeshaan.
Booqashada wafdiga isugu jira Wasiirada, xildhibaanada iyo taliyaasha ciidamada ayaa la sheegayaa inay la xiriirto xalinta khilaaf soo kala dhex galay Mas'uuliyiinta Gobolka, iyo cabasho ka soo yeereysay dadka deegaanka oo ku aadanaa falal amni daro oo ka jira magaalada.